ISAN PANCRACIO: IMBALI, UNQULO, KUNYE OKUNINZI
Kule nqaku, siza kukubonisa ulwazi olubalulekileyo kunye neenkcukacha ezinkulu malunga nembali kunye nohlobo lonqulo olunikezelwa kulo ISan Pancracio; umfana osweleyo, osweleke esemncinci ethembekile kwinkolo yakhe kuThixo.
1 ISan Pancracio: Ibingubani?
1.1 Ukunyaniseka nokubaluleka kobuKristu
2 I-Hagiography yeSan Pancracio, iinkcukacha zobomi bakhe
3 Unqulo kunye nokuzinikela okunikezelwa kwiSan Pancracio
ISan Pancracio: Ibingubani?
UPancracio, ogama lakhe ngesiLatini nguPancratius, nakwisiGrike samandulo njengo-Ágios Pan'krátios; Ungomnye wamanani angcwele abaluleke kakhulu kwiCawa yamaKatolika, wabhengeza ukuba ngumfeli-nkolo kwaye wangcwaliswa njengoNgcwele. Ukubhiyozelwa kwayo kwenzeka nge-12 kaMeyi.
Wazalwa ngo-289 AD, ekuphakameni kobuKristu, ngelo xesha; Wayengummi waseRoma, ezinikele kule nkolo, owayehlala eFrigiya, ingingqi yeAsia Minor, ngoku engqinelana neTurkey. Wafa ngo-304 AD, eneminyaka eli-15 kuphela ubudala, enqunyulwa intloko; Yiyo loo nto ethathwa njengomnye wabafeli-nkolo bokuqala beCawa yamaKatolika.
Ukunyaniseka nokubaluleka kobuKristu
Njengamanani amaninzi abalulekileyo enkolo yamaKatolika, ISan Pancracio ubukho bakhe bokwenyani buyathandatyuzwa; kuba, kuthiwa, akukho datha iyinyani ngobomi bakhe kunye nokufa kwakhe egciniweyo, okanye nantoni na malunga nemisebenzi yakhe.
Ngaphandle kwale ntetho yokugqibela, umzobo wale ngcwele uye waba luphawu lokholo kunye namandla; Ingakumbi kubantwana nakwishumi elivisayo, ngenxa yobuncinci bakhe xa wayenqunyulwa intloko. Ke namhlanje, abazali abaninzi bathandaza ngokuzinikela kwiSan Pancracio kwintlalo-ntle yabantwana babo; Iinkonzo ezinkulu zinikezelwa kule ngcwele, kwaye zisasazeka kakhulu kwihlabathi liphela, kubantu abangamaKatolika.
Ukuba uyifumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: Gxila kwizifundo kunye nomsebenzi.
Igama lakhe ngesiGrike lithetha "lowo uxhasa yonke into" okanye "oxhasa yonke into"; ekomeleza ngakumbi ukumelwa kwayo kwinkolo yamaKatolika.
I-Hagiography yeSan Pancracio, iinkcukacha zobomi bakhe
Kunzima kakhulu ukwazi ukuba kwenzeka ntoni kanye ebomini bakhe, okanye nokuba ebekhona nyani, njengoko inkolo yamaKatolika ikhankanyileyo okoko wabekwa njengowamkelekileyo. Ke ngoko, iinguqulelo ezininzi zobomi bakhe zinokufunyanwa kunye / okanye ukuviwa.
Iinkcukacha zokuqala eziphume eluntwini kwaye zezona "zinokuthenjwa", kodwa kwangaxeshanye, kubonakala ngathi yintsomi; baphuma kwinkulungwane yesi-500 (unyaka wama-XNUMX). Mhlawumbi, ISan Pancracio, uzalwa yintsapho etyebileyo nenesidima, ukongeza, ukuba aba yayingabahedeni; Ngelishwa, uyise wale saint wasweleka, kodwa ngaphambi kokuba afe, wathumela ukuba baphile ISan Pancracio apho umalume wakhe, uDionisio.
Emva kwesi siganeko sibi, bobabini banduluka besiya eRoma baya kuhlala eNtabeni iCelio; Ngelo xesha, upopu ophetheyo yayinguCornelius (upapa wamashumi amabini ananye weCawa yamaKatolika), owaphumelela ekoyiseni uPancracio kunye nomalume wakhe ukuba baguqukele kubuKrestu.
Emva kwexesha elithile, iPancracio ibonakala ngaphambili umlawuli UmRoma esemsebenzini, uDiocleciano okanye okwaziwa ngokuba ziiDiocles; ozama ukweyisela inkwenkwe ukuba iyikhanyele kwaye iyirhoxise inkolo yayo, kodwa ngaphambi kokwala kwale yokugqibela, umlawuli uyamgweba ukufa. Umfana unqunyulwe intloko kwaye umzimba wakhe kunye nentloko ziqokelelwa ngumfazi ogama linguOctavia, wangcwatyelwa kufutshane "ngeAurelia"; indawo apho iminyaka kamva, iBasilika ka ISan Pancracio, malunga ne-AD 500
Kukule Basilica, apho amarhe malunga nePancracio encinci aqala khona kunye nenkulungwane kamva, phantsi koPopu ka-Saint Gregory Omkhulu, ii-homilies (ukufundwa kweenkonzo zamaKatolika) ziqala ukubanjwa kumsitho wokuzalwa kwakhe. Kancinci kancinci, njengoko ixesha lihamba, ezi nkonzo zenziwa rhoqo ngakumbi nangakumbi ngamandla; ukufikelela phezulu ilanga yanamhlanje, iphakamisa isitayile ISan Pancracio njengengcwele yomxhasi wabantwana nolutsha, njengabo bonke abantu abafuna umsebenzi.
Unqulo kunye nokuzinikela okunikezelwa kwiSan Pancracio
Okwangoku uGregorio Magno, eqala ukunika iinkonzo zokuqala kwisanta, kamva ziyaqhubeka ukwenziwa, njengoko besesitshilo kwinqanaba langaphambili; ii-homilies zifikelela kweminye imimandla yaseYurophu naseAsia, kodwa hayi kakhulu eSpain, kodwa emva kwexesha elide.
Umelwe njengomntwana okanye okwishumi elivisayo, ephethe isebe lomnquma, enxibe njengejoni okanye enxibe ingubo yamaRoma.
Kule vidiyo ilandelayo ingezantsi, uya kuba nakho ukufunda okungakumbi ngobomi bale ngcwele, egcina amahlwempu kwaye inceda kwithamsanqa labo.